Hehy · Jona, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Hehy · Jona, 2017
Tantara mikasika ny Hehy tamin'ny Jona, 2017
Arabia Saodita: Voagadra Tanaty Birao
Efa taraiky niasa hariva tao amin'ny birao ve ianao? Mizara amintsika ity tantara mahaliana momba ny fomba nahavoahidy azy tao amin'ny biraony indray alina ity i Ar6abon [Ar] avy any Arabia Saodita.
Eoropa Andrefana 22 Jona 2017
Israely: Voro-pirenena Vaovao, Tsara Ihomezana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 21 Jona 2017
Tamin'ny alina, nitatitra ny sasany amin'ireo fampandrosoana lehibe kokoa mitranga ao Isiraely i Stephen Colbert. Nanombohana azy, manana voro-pirenena vaovao i Israely .
Jordania: Lehilahy, Vehivavy ary Ankizy Vita amin'ny Ranomandry
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 20 Jona 2017
Mafana ny fifaninanana eo amin'ireo bilaogera Jordaniana izay mifaninana ho voalohany amin'ny fanamboarana ranomandry lehilahy sy vehivavy ka nahatonga ny bilaogera iray hiantso fampitsaharana. Amin'ny Aterineto mihisatra manerana ny Afovoany Atsinanana dia tsy mahagaga ho an'ny bilaogera ao Jordania ny mizara ny famoronany any an-kafa.
Hanao Ahoana ny Fifandraisan'i Etazonia sy Aostralia Taorian'ny Esonteny Nataon'i Malcolm Turnbull an “ilay Donald”?
Oseania 20 Jona 2017
Ilay zokiolona amin'ny fanaovana gazety ara-politika Aostraliana, Laurie Oakes, no loharano niporitsahan'ilay rakipeo misy ilay fanesonesoan'ny PM Malcolm Turnbull ny filoha amerikana Donald Trump, nandritra ny fandihizana antenantenan'ny ririnina fanao ao Canberra
Nitaraina momba ny tantara mitohy Iraniana ao amin'ny Channel 3, Char Khoone, izay mampiseho mpilalao Afgàna ho masiaka be ny masoivoho Afghàna ao Iran. Naneho hevitra momba izany vaovao izany ireo Afgàna maro ary koa ireo bilaogera Iraniana.
‘Iza no Manana Sarintena “Selfie” Be Indrindra?’ Sambany Nihaona Tao Amin'ny Parlemanta Rosiana Ny Filankevitr'ireo Bilaogera
Rosia 20 Jona 2017
"Manana [sarintena] maherin'ny iray alina aho," hoy i Zhirinovsky nivazivazy. "Iza no manana betsaka noho izaho? Tsy misy!"
Tonizia: Ny Gazety Baklava
Maneso ny gazety iray ato amin'ity lahatsoratra amin'ny teny Arabo ity ilay bilaogera Toniziana Boudourou noho ny famoahana dokambarotra izay mandrisika ny mpamaky mba hisoratra anarana ary hahazo fonosana balkava misy an'irony 'amandes' irony.